၀၄:၁၅၊ ၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၁၁၈ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၃ လ
→‎ကျေးရွာ နှင့် အိုးအိမ်တည်ဆောက်ပုံဓလေ့
၀၄:၁၃၊ ၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၄:၁၅၊ ၂၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
(→‎ကျေးရွာ နှင့် အိုးအိမ်တည်ဆောက်ပုံဓလေ့)
[[ဖိုင်:Mru man builds bamboo house.jpg|thumb|266x266px|မြိုလူမျိုးနေအိမ်တည်ဆောက်ပုံ]]
မြိုတိုင်းရင်းသား တို့သည် တောတောင်ကိုနှစ်သက် သူများဖြစ်ကြသည် တောတောင်များကိုငါတို့ ကျေနပ်စွာ အုပ်စိုးမည် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်စားသောက်မည်ဟု ခံယူထားကြပြီး တောတောင်များကို အုပ်စိုးသည့် တောင်မင်း'' ဟု ဆိုရမှာပါ။ ကျေးရွာတည်ဆောက်ရတောမည်ဆိုလျှင် တောင်ယာ စို်က်ပျိုးရန်၊ အမဲလိုက် အသားငါး ဖမ်းရန်၊ ရေ၊ သီးနှံ ဆွတ်ခူးစုဆောင်းရန် နှင့် အေးချမ်းသာ ယာမှု ရှိသည့် အရပ် ကို စလေ့လာရသည်။ ပြီးနောက် မြို တို့၏ ရိုးရာ ဓလေ့အရ ကျေးရွာ ကိုတည်ထောင်ရန် မြေနေရာ ကို စနစ်တကျရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ရွေးချယ် ကြပုံမှာ ''ရွာတည်ထောင်လိုသည့် မြေကွက်တွင် ဆန်စေ့ သို့မဟုတ် ငရုတ်ကောင်းစေ့ ကို မြှပ်နှံပြီး မြေနေရာကောင်း ၊မကောင်းသိရှိနိုင်ရန် မြေစောင့်နတ်ကို တိုင်တည်၍ ဆုတောင်းရသည်။ နောက်တစ်နေ့ နံနက် တွင် မြှပ်နှံထားသည့် ဆန်စေ့၊ [[ငရုတ်ကောင်းပင်|ငရုတ်ကောင်း]]စေ့ များကို တူးဖော်ကြည့်ကြသည်။ မကျိုးမပဲ့ အကောင်းအတိုင်း ရှိပါက မြေကွက်တွင် ရွာတည်ထောင်ရန် သင့်သည်ဟု ယူဆကာ ကျေးရွောတည်ထောင်ကြသည်။ အကယ်၍ မြှပ်နှံထားသည့် ဆန်စေ့ သို့မဟုတ် ငရုတ်ကောင်းစေ့ များကျိုးပဲ့နေပါက ထိုနေရာတွင် ကျေးရွာတည်ထောင်ရန်မသင့်ဟု နတ်က ညွန်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခံယူကြသည်။
ပြီးနောက် ရွာတည်မည့် မျိုးနွယ်အကြီးအကဲ သို့မဟုတ် ကျေးရွာလူကြီးခေါင်းဆောင်က အိပ်မက်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ရွေးချယ်ကြသည်။ [[အိပ်စက်ခြင်း|အိပ်မက်]] တွင် ငါး ၊ရေကြည် ပြင် ၊ မြင်မက်က ကောင်း၏ ။ထိုနေရာ တွင် ရွာတည်ကောင်း၏ စီးပွားဖြစ်ထွန်းမည်၊ ငွေရေးကြေးရေး အဆင်ပြေမည် ယူဆကြသလို ပန်းနီ ၊ မြွေ ၊မီး ၊မိုး မြင် မက်ပါက လူသေများမည်၊ ပြဿနာများမည် စီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးနည်ဟု ယူဆကြလေသည်။<ref>THE BRITISH BURMA GAZETTEER IN TWO VOLUMES. VOZi. II PRINTED AT THE GOVERNMENT PRESS. 1879: Rangoon,p, 425.</ref>
အိုးအိမ် တည်ဆောက်ရာမှာလည်း ရိုးရာဓလေ့ အိမ်သစ်တည်ဆောက်ရာမှာလည်း မိမိ အိမ်တည်ဆောက်လိုသည့် မြေကွက် ၌ ဝါးခြမ်းတိုများဖြင့် စိုက်ပြီး မြေစောင့်နတ် ကို ကြက်ကလေး အဖြူ ၊ကြက်နီ ဖြင့် ပူဇော်ပသ တိုင်တည်၍ အိမ်ဆောက်လုပ်ရန်ကောင်း မကောင်း ကို အိပ်မက်တောင်းကာ ဆုတောင်းရသည်။ ထိုည၌ အိမ်မက်ကောင်းမြင်မက်ပါက ထိုနေရာတွင် အိမ်တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ကြသည်။ အိမ်မက်တွင် မီး ၊ မိုး ၊ ပန်းနီ ၊လေယဉ် မြင်မက်ပါ က လုံးဝ အိမ်တည်ဆောက်ရန်မကောင်းဟု ယူဆလေ့ရှိသည်။ ကောက်ယူသည့် အနက်က မီး မြင်မက်က ပြဿနာများမည်၊ မိုးမြင်မက် က၊ မျက်ရည်ကျမည်၊ ပန်းနီမြင်မက် က အစိမ်းသေ၊ လေယဉ်မြင်မက်က လူသေအလောင်း …စသည့် အနက်ကို ကောက်ယူကာ မကောင်းဟု မှတ်ယူကြသည်။
ရိုးရာအိမ်ကို သစ်ဝါးကို အခြေခံ ကာ တည်ဆောက်ကြသည်။ သို့သော် များသောအားဖြင့် ဝါးဖြင့် ခြေတံရှည်အိမ်များ ကို တည်ဆောက်ကြသည်။ <ref>https://www.researchgate.net/publication/226498628_Housing_pattern_and_food_habit_of_theMro-tribe_community_in_Bangladesh_A_forest_dependence_perspective မြိုလူမျိုးတို့ ရိုးရာအိမ်တည်ဆောက်ပုံအကြောင်းတရား။</ref>အိမ်မဆောက်မီ လိုအပ်သော ဝါး ၊သစ်များ ၊နှီး များကို စုဆောင်းပြင်ဆင်ထားရသည် ။ ''အိမ်တည်ဆောက်ရာတွင် ခေါင်တိုင်ကို မင်္ဂလာ တိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ဦးစွာစိုက်ထူလေ့ရှိသည် တိုင်ကို အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင်စိုက်ထူရသည်။ ပြီးနောက် မြိုတိုင်းရင်းသားရိုးရာအိမ်များသည် အရှေ့ဖက်တည့်တည့် မျက်နှာမူလေ့မရှိပေ။အလျားလိုက် ရှေ့ဖက်နေထွက်ရာဖက်မှအနည်းငယ်စောင့်ကာ ဆောက်လေ့ရှိသည်။ အမိုးအကာ နှင့် လိုအပ်သည့် အခင်းတို့သည် ဝါးလုံး ၊ ဝါးရွက်နှင့် သက်ကယ် များကို အသုံးပြုကြသည်။ အိမ်ဆောက်လုပ်ရာတွင် `အိမ်မ`နှင်`့ မောင်းကာ` ဟု၍ ရှိသည် ''အိမ်မ''ကို (ကိမ်-Kim ) အိမ်မကို(ကိမ်မာ-Kimma) အိမ်ဖိုကို(ကိမ်တောမ်-Kimtom) ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါက ''မောင်းကာ'' ကိုရှေ့တစ်ဆောင် နောက်တစ်ဆောင် တွဲ ဆောက်လေ့ရှိသည်။ အနောက်ဖက် အဆောင်ငယ်သည် အိမ်တွင်း အသုံးပြု မည့် ပစ္စည်းများ တိုထားရာနေရာ၊ ရှေ့ဖက်အဆောင်ငယ်သည် ဧည့်သည် ခန်း အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ''အိမ်မ'' သည် မိသားစု အိပ်ခန်း ရိုးရာ တန်ဖို့ထားရသည့် ပစ္စည်းများ ထားရသည် အတွက် အပြင်လူ ဝင်လေ့မရှိ။ အိမ်ခေါင်သည် ခေါင်ချိုး ဖြစ်သည် ဘယ်ဘက်ထောင့်နားမှာ ရေစင်ရှိပြီး ညာဖက်ထောင့်တွင်အိုးခွက် ပန်းကန် ၊[[ဟင်းသီးဟင်းရွက်]]ထားရာစင်၊ အိမ်မ ထောင့်တွင် မီးဖို ရှိသည် မီးဖိုသည် စနေနေ့လုပ်လေ့မရှိပေ အကြောင်းမှာ စနေသည် မီးဖြစ်သည်ဟု ယူဆထားပါသည်။။မီးဖို လုပ်သည့် အခါတွင် မြေသားကို ပလှိုင်းတောင်းဖြင့် စုံ ဂဏန်းမဖြစ်ရ မြေအရေအတွက် မ ဂဏန်းဖြင့်သယ်ရသည် မီးဖိုလုပ်ရာ၌ မရယ်ရ ရယ်မိရင် [[မီးဖို]] အက်ကွဲတတ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ မီးဖိုတန်း ပေါ်၌ ကျပ်စင်တစ်ခုရှိပြီး ရေဘူးခွန်ထည့်ထားပြီး ကြာရှည်ခံရန်နှင့်အနှံကောင်းစေရန် ဖြစ်သည်။ အိမ်တစ်အိမ်တွင် ဓားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ သိနိုင်ပါသည်။ အိမ်တွင်လူ မရှိပါ က လှေကား ကိုမှောက်လှန်ထားခြင်း၊ဝါးထရံကာထားခြင်း ပြုလုပ်ထားလေ့ရှိသည်။''မြို''တိုင်းရင်းသားတို့၏ရိုးရာအိမ်ဆောက်လုပ်ပုံတွင်ထူးခြားချက်မှာ မိဘများ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာလျှင် ကွပ်ပျစ်နှင့် တစ်ဆက်တည်းတွင် မိဘဆောင်ကိုတွဲ၍ ဆောက်လုပ်ပေးလေ့ရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအဆောင်လေးမှာနှစ်လောက်စာနေလောက်ရုံအခန်းငယ်ကလေးဖြစ်သည်။<ref>Housing pattern and food habit of the Mro-tribe community in Bangladesh: A forest dependence perspective <br /></ref>
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/531756" မှ ရယူရန်